सेल्फीको सान बढाउँदै स्मार्टफोन
सहदेव चौधरी शुक्रवार, जेठ २६, २०७४ 7967 पटक पढिएको
पछिल्लो समय विश्वबजारमा स्मार्टफोनले सेल्फी सिस्टमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । ग्राहकको चाहना र इच्छालाई नजिकबाट नियाल्दै विभिन्न कम्पनीले सेल्फीलाई आफनो स्मार्टफोनको सानको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । विशेषगरी विश्वबजारका एन्ड्राइड मोबाइलले सेल्फीलाई आफ्नो ब्रान्डको रूपमा चिनाउँदै आएका छन् । तीमध्ये नेपालमा कब्जा जमाउन सफल सेल्फी स्मार्टफोनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
ओप्पो सेल्फीको एक्सपर्ट
क्यामेरा फोनको रूपमा आफूलाई विश्वबजारमा स्थापित गरेको ओप्पो विशेषतः युवा वर्गमा सेल्फीका कारण लोकप्रिय बनेको छ । ओप्पोमा ८ मेगा पिक्सेलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामरा रहेको छ भने यसको वाइड एफ १.२० एपर्चर लेन्स रहेको छ । यो स्मार्टफोनमा एक चौथाइको सेन्सर समाहित छ । यसले गर्दा सेल्फी लिँदा क्यानमरामा प्रकाश राम्रोसँग छिर्ने र फोटो सफा आउने गर्छ । यसका साथै यस सेल्फीले ५ मेगा पिक्सेल क्यामेराको भन्दा ३० प्रतिशत बढी क्लियर फोटो खिच्ने र ४० प्रतिशत बढी प्रकाश चम्काउने गर्छ ।
यस्तै एफथ्रीमा डुअल फ्रन्ट क्यामेरा उपलब्ध भएकाले एकल सेल्फीका लागि १६ मेगापिक्सेल र गु्रप सेल्फीका लागि वाइड एंगल लेन्ससहितको क्यामेरा जडान गरिएको छ । यो स्मार्टफोनमा प्रयोग भएको डबल भ्यु गु्रप सेल्फी क्यामेराले साधारण सेल्फी क्यामेराको तुलनामा दुई गुणा बढी फिल्ड अफ भ्यु दिन्छ ।
ओप्पोसँगै भित्रिएका कतिपय मोबाइल ब्रान्डको नेपाली बजारमा हिस्सा छैन । आक्रामक बजार विस्तारको रणनीति लिएको ओप्पो स्मार्टफोन सेल्फी नेपाली बजारमा ग्राहकको रोजाइमा पर्न सफल पनि भएको छ । नेपालमा मात्र नभई स्मार्टफोनको विश्वबजारमा पनि ओप्पोले आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । इन्टरनेसनल डाटा कर्पोरेसन (आईडीसी) ले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार चाइनिज ब्रान्ड ओप्पो सन् २०१६ मा १६ दशमलव ८ प्रतिशत बजार हिस्सासाथ चाइनामा नम्बर १ स्मार्टफोन ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको थियो । ओप्पो विश्वकै चौथो बेस्ट सेलिङ स्मार्टफोन ब्रान्डका रूपमा रहेको आईडीसीले जनाएको छ ।
सामसुङको अब्बल सेल्फी
सामसुङ विश्वबको पहिलो रोजाइको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा पर्दछ । यसको सेल्फीमा एलईडी फ्ल्यानस लाइट राखिएको हुन्छ । यसको फ्रन्ट क्या मरामा ५ मेगापिक्सेल देखि १६ मेगा पिक्से लसम्मको सेल्फी क्याोमरा जडान गरिएको छ। सामसुङको सिनाइन प्रोमा १६ मेगा पिक्सेलको सेल्फी क्याेमरा समाहित छ जसमा ६ जीबीको र्‍याम प्रयोग गरिएको छ ।
६.९ मिलिमिटर रहेको यो स्मार्टफोनमा आइफोन ६ भन्दा पातलो छ । यसका साथै यसको सेल्फी क्या.मरामा १.९ एपर्चरको राखिएको छ जसले तस्बिरलाई थप चम्किलो र उपर्युक्त बनाउन मद्दत गर्दछ । यस्तै यसमा दूरीलाई मिलाउने कर्भसमेत राखिएको छ । यतिमात्रै नभएर सामसुङको स्मार्टफोनमा सेल्फी सटलाई इच्छाअनुसार सजिलै सेभ गर्न पनि सकिन्छ ।
साओमीमा अल्ट्रापिक्सेल सेल्फी क्यामरा
नेपाली बजारमा रुचाइएको अर्को चिनियाँ मोबाइल ब्रान्ड हो साओमीको एमआई । एमआईले पछिल्ला समय बजारमा भित्र्योएको एमआई एम ५ सिरिजअन्तर्गतको परिष्कृत र अत्याधुनिक स्मार्टफोन हो एमआई एम ५ प्लस । ५.७ इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले रहेको यस स्मार्टफोनमा ४ जीबी र्‍याम र ६४ जीबीको आन्तरिक मेमोरी प्रयोग गरिएको छ । क्वालकम स्न्यापड्रागन ८२१ प्रोसेसर प्रायोग गरिएका कारण यो स्मार्टफोन तीव्र गतिमा चल्नुका साथै यस फोन ह्याङ हुने समस्या पनि हुँदैन ।
एमआई एम ५ प्लस इन्ड्रोइड मार्सम्यालो ६.० अपरेटिङ सिस्टममा आधारित छ । यस मोडलमा ४ मेगापिक्सेलको अल्ट्रापिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा प्रयोग गरिएकाले सेल्फी प्रेमीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । यस स्मार्टफोनमा १३ :१३ मेगापिक्सेलको डुअल क्यामेरा जडित छ । यसले प्रयोगकर्तालाई डीएसएलआर क्यामेरा सरहको इमेज एक्सपेरिएन्स प्रदान गर्न सक्छ ।
जिओनीमा सेल्फी फ्ल्यास
२० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरायुक्त स्मार्टफोन सेल्फीप्रेमी प्रयोगकर्ता माझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । सेल्फीको लागि जियोनीको एवान स्मार्टफोन सबैको रोजाइमा परेको छ । १६ मेगा पेक्सिेल फ्रन्ट क्यागमरा भएको यो स्मार्टफोनमा सेल्फी फ्ल्यास रहेको छ भने ४ जीबीको रोम रहेको छ ।
२० मेगा पिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा राखिएको छ भने पछाडिपट्टि १३ र ५ मेगापिक्सेलका दुईवटा क्यामेरा छन् । ४५५० मिलियम्पियरको ब्याट्री रहेको एनवान प्लस ६ इन्च साइजको ठूलो स्क्रिनयुक्त फोन हो ।
एन वानमा जस्तै यसमा पनि ४ जीबी र्‍याम र ६४ जीवी स्टोरेज क्षमता छ । यी दुवै स्मार्टफोनमा २ मिलिसेकेन्डमै खुल्ने फिंगर सेन्सर रहेको छ भने एन्ड्रोइड ७ अपरेटिङ सिस्टमयुक्त छन् । सुपर सेल्फी, सुपर ब्याट्रीको ट्यागलाइनसहित आएको ए सेरिजले जियोनीको बजार हिस्सा बढाउने देखिएको छ।
हुवावेको हाइडेफिनेसन सेल्फी
चिनियाँ मोबाइल कम्पनी हुवावेका सेल्फी स्मार्टफोन विश्व् बजारमा रुचाइएको छ । तीमध्येज हुवावेको ‘अनर नाइन' मोडलको फोन उत्कृष्ट सेल्फिफोन मानिन्छ । फोन ५.२ इन्च एचडी स्क्रिन तथा एन्ड्रोइड नोगट भर्सनमा उपलब्ध गराइएका यसका स्मार्टफोनमा ४ तथा ६ जीबीको र्‍याम भेरियन्ट समावेश गरिएको छ । यो फोनमा ६४ जीबी इन्टरनल मेमोरीसँगै ३१०० एमएएचको ब्याट्री राखिएको छ । यस फोनमा २० मेगापिक्सेलसहित १२ मेगापिक्सेलको सेन्सर डल क्यामेरा तथा ८ मेगासपिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा राखिएको छ।
एक पटक हुवावेले सेल्फी खिच्न नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो । हुवावेको मेट ९ मोडेल फोनले तीन मिनेटमा एक सय ६० वटा हाइ डेफिनेसन सेल्फी खिचेर नयाँ कीर्तिमान राखेको थियो । यसअघि सोही समयमा मेक्सिकोमा १२२ सेल्फी खिचेर बनाइएको रेकर्ड तोड्दै दुबईमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरिएको थियो । (एजेन्सीको सहयोगमा)
को बन्ला मुख्यसचिव ? 10718
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 2933
जो कुकुर मर्दा १३ दिन किरिया बसिन् 15759
जनकपुरमा दीपावलीको भव्य तयारी 539
भारतबाट ल्याइएको दस लाखको पटाका नष्ट 899
कपास उद्योगमा आगलागी, १४ लाखको क्षति 770
डा. केसीले तोडे अनशन 3543
प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखको गाडीमाथि ढुंगा प्रहार 10031